नरेश फुयांल । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा पनि यौन व्यबसाय फष्टाउदै गएको छ । लुकिछिपी रुपमा गरिने यो ब्यबसायलाई सरकारले अझै बैधानीकता नदिए पनि भुमिगत रुपमा यसमा ठूूलै जमात सक्रिय रहेको छ ।
बिभिन्न समयमा संस्थागत तथा ब्यक्तिगत रुपमा गरिएका अनुसन्धानहरुले यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् । अझै पनि कति यौन ब्यबसायी यसमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन् ? कसैले पनि यकिन तथ्याङ्गक सार्बजनीक गर्न सकेका छैनन् । तर मुख्य शहर तथा राजमार्गहरुमा हजारौको संख्यामा यौन ब्यबसायीहरुले यो धन्दा गरिरहेको बताइएको छ ।
जवानी अर्थात चढ्दो उमेर छउञ्जेल गरिने यो ब्यबसाय गर्नेहरुलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्न नसक्नु नै यकिन तथ्याङ्गक आउन नसकन्ुको मुख्य कारण रहेको जानकारहरु बताउछन् । काठमाण्डौमा दैनिक ५ हजार भन्दा बढी यौनकर्मीले यो ब्यबसाय गर्दै आएका एक तथ्याङ्गकले देखाएको छ ।
जसमा १५ देखी ४५ बर्ष उमेरका महिला संलग्न छन् । जसमा बाहुन–क्षेत्री समुदायका महिला सबै भन्दा बढी छन् भने दोश्रो स्तानमा मंगोल समुदाय का र तेश्रो स्थानमा नेवार समुदायका महिला रहेका यौन अध्यता डा लक्ष्मि घिमिरेलाई उद्रित गर्दै अश्विनी कोइरालाले आफ्नो पुष्तक उनीमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।
७७ प्रतिसत महिलाले दिनमा २ देखी ४ जना ग्रहकसंग यौन सम्पर्क राख्छन् भने १६ प्रतिसतले १ जनासंग मात्रै यौन सम्पर्क गर्छन । २ देखी ४ जनासंग यौन सम्पर्क गर्नेहरुले एक जनासंग ५ सय रुपौया लिन्छन् भने १ जनासंग मात्रै गर्नेले २ हजार देखी माथी लिने गरेका छन् ।
स्मरण रहोस यौन अध्यता केशीका अनुसार यस्तो यौन ब्यबसायीका मुख्य नियमित ग्राहक सुरक्षाकर्मी, दोश्रोमा सवारी साधन चालक र तेश्रोमा बिद्यार्थीहरु रहेका छन् ।
कति पय यौन ब्यबसायीले रामै आम्दानी गरेपनि अधिकांसले पैसा भने नबचाउने गरेका र मादर्क पदार्थ सेवन गरेर खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । सानैमा यौन धन्दामा लागेकाहरु घर फर्किएर नजाने र कति पय बाबु आमा बेगरका हुनाले नागरिकता नहुदा उनीह्रुले बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुमा खाता खोल्न नपाउने हुदा पनि पैसा बचत गर्ने ठाउ नभएकाले यस्तो समस्या आउने गरेको पुष्तक उनीमा उल्लेख छ ।
साधारण तया द्वन्दमा गाउ बस्न नसकेर शहर छिरेका र शहरमा बेरोजगारी भएपछि यौन कर्मममा लाग्ने गरेको र पछि यसैमा रमाउन थालेकाहरु बढी पाइएको छ । बैश छउञ्जेल यस्तो ब्यबसायमा लाग्नेहरुको उमेर ढल्किदै गएर जवानी सकिएपछि दलालीको काम गर्ने गरेका छन् । महिला मात्रै होइन यो ब्यबसायमा पुरुष पनि संलग्न छन् । नेपालमा पुरुष यौन ब्यबसायीलाई जिगोलो भनरे चिनिन्छ ।
बिशेष गरी पुरुष यौनकर्मीहरुका ग्राहक सम्पन्न तथा अधिकांम्स बिबाहित महिलाहरु हुने गरेका जानकारहरु बताउछन् । उनीहरु त्यस्तो पुरुष यौनकर्मीलाई घरमै बोलाउने या शहर बाहिरका महङ्गा होटल तथा रेष्टुरेण्ट तथा रिसोर्टहरुमा आफ्नै सवारी साधनामा लगेर रात बिताउछन् ।
त्यस्ता जिगोलो अर्थात पुरुष यौनकर्मीहरुलाई होटल तथा रिर्सोटमा आफ्नै श्रीमान भनेर चिनाउने उनीहरुले परपुरषसंग यौन सम्बन्ध रहेको आफ्नो परिवार तथा नातेदारमा नफैलियोस भनेर जिगोलोहरुलाई मोटो रकम दिने गरेका अध्ययनमा पाइएको छ ।
यसरी केही समयअघी सम्म नेपालमा महिलामा मात्र सिमित रहेको यो भुमिगत ब्यबसायमा पुरुषहरु समेत लागीसकेको अवस्थामा रेडलाइट एरिया स्थापना गर्ने या नगर्ने भन्ने बिषयमा बिभिन्न समयका सरकारका मन्त्रीहरुले कुरा उठाए पनि त्यसमा अझै खुलेर बहस समेत हुन सकेको छैन ।
संसारकै पुरानो ब्यबसाय मानिने यो यौन ब्यबसायलाई बैधानीकता दिए भुमिगित रुपमा हुने बिक्रित सेक्स सम्बन्ध पनि क्रमश घट्दै जाने र सरकारलाई समेत आयको एउटा श्रोत हुन सक्ने थियो । कतिपय पशिच्चमा राष्ट्रहरुले यसलाई ब्यबसायको रुपमा स्विकार गरेको दशकौ भइसकेको छ ।
त्यसैले अब नेपालमा पनि यौन ब्यबसायलाई कानुनी मान्यता दिने या नदिने ? तत्काल निर्णय गरि दिने भए रेड लाईट एरिया तोक्ने नभए प्रहरी प्रशासनलाई यसबिरुद्ध खरो उतारेर अबैध संबन्ध न्यूनिकरण तर्फ लाग्नु पर्छ ।